Izinto ongazibona eSaint Malo, eFrance | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | EFrance, Yini ongayibona
I-France inezindawo ezinhle lapho ubuciko nomlando kuhlanganiswa khona. Omunye wabo ngu I-Saint Malo, indawo ethandwa kakhulu yabavakashi e-French Brittany. Uma uthanda ukuthwebula izithombe, linda uze ubone konke lokho le nqaba yasendulo okufanele inikeze izivakashi zayo ezishisekayo.
Namuhla, ongakubona eSaint Malo, eFrance.
2 Yini ongayibona eSaint Malo
Umlando walokhu isiqhingi esinamadwala iqala nge isisekelo sedolobha ngekhulu lokuqala BC, hhayi endaweni efanayo kodwa eduze kakhulu. I-Aleth Fort, lapho imi khona i-St-Servan namuhla, yakhiwe ngu- isizwe sama-celtic ukugada isango loMfula uMfula.
Nini afika amaRoma babasusa futhi baqinisa indawo. Ngemva kwesikhathi, ekhulwini lesi-XNUMX, izindela zase-Ireland zafika lapha Brendan no-Aron, futhi basungula isigodlo sezindela.
Isiqhingi sase I-Saint-Malo ixhunywe ezweni elikhulu kuphela ngomgwaqo oyisihlabathi nangesikhathi sokuhlasela kwamaViking okunodlame okwakuyingxenye yokuzivikela kwawo kwemvelo. Umbhishobhi uJean de Chatillon wanezela amaxhaphozi nezindonga ngekhulu le-XNUMX, okwenza kube nenqaba yangempela.
Ngokuhamba kwesikhathi izakhamuzi zaseSaint Malo zaba nomuzwa onamandla wokuzimela futhi lokho kubabonisa noma bemelene nababusi iBrithani, iFrance neNgilandi ababenabo. Amatilosi ayo ayecebile futhi ayaziwa ngokuphanga imikhumbi yakwamanye amazwe eyayidabula kulo msele. Empeleni, babengama-corsairs noma abaphangi abasemthethwenis, futhi wenza ikakhulukazi phakathi nekhulu leshumi nesikhombisa neshumi nesishiyagalombili ngaphansi kokuvikelwa kwenkosi yaseFrance. Odumile I-Patent ye-corso.
Omunye amatilosi edume kakhulu France, ngubani I-Discovery of Canada iyahlonishwa ngaphandle kokuqhubeka, kunjalo UJacques Cartier, ongowokuzalwa eSaint Malo. Esekelwa uFrancis I waseFrance, wathatha uhambo oluthathu lokuya eNyakatho Melika ngekhulu le-XNUMX futhi waba nguye owokuqala waseYurophu ukufika endaweni manje ebizwa ngokuthi iMontreal-Quebec. Wabhapathiza lamazwe ngokuthi "Canada", igama elivela kubantu bokuqala bendawo futhi okusho ukuthi idolobhana elincane.
Phakathi neMpi Yezwe II leli dolobha lalicekeleke phansi. KwakunguGeneral Patton waseMelika owaziwayo, owavimbezela idolobha futhi waliqhumisa ngamabhomu kwaze kwaba yilapho amaJalimane ezinikela. Kudingeka ukwakhiwa kabusha okuphelele kwenkazimulo nobuhle beSaint Malo Iminyaka engama-30 yokwakhiwa kabusha.
Ungafika kanjani eSaint Malo? Ziningi izindlela kodwa ezidume kakhulu ngesikebhe esisuka ogwini oluseningizimu yeNgilandi noma nge-Channel Islands. Kunezikebhe zaseBrittany ezixhuma iPortmouth, eNgilandi, noSaint Malo ewela izikhathi eziyisikhombisa masonto onke ohambweni lwamahora ayisishiyagalolunye, iCondor Ferries exhuma izindawo ezifanayo kodwa nezinye izindawo ogwini lwaseNgilandi. Ngokolunye uhlangothi ungahamba ngendiza, isikhumulo sezindiza singamakhilomitha angu-14 ukusuka enqabeni, kodwa ngemva kwalokho kufanele uqashe imoto ngoba alikho ibhasi noma isitimela esixhumayo.
Uma uthanda isitimela isiteshi sesitimela singamakhilomitha amabili empumalanga yenqaba. Angakwazi hamba usuka eParis ngohambo lwamahora amathathu nemizuzu eyi-10s, kusukela esiteshini saseMontparnasse, ohambweni oluphelele lwamahora ayisikhombisa. Uma useLondon ungahamba futhi, usuka e-St. Pancras uye e-Paris futhi usuka lapho i-TGV uye e-Saint Malo.
Yini ongayibona eSaint Malo
Esokuqala ukuthi iCitadel. Iyindawo ebaluleke kakhulu eheha izivakashi: imigwaqo yakhona emincane, amabha kanye nezindawo zokudlela, izitolo zayo… Kuyindawo enhle ngempelasonto. I-citadel ihlezi esiqhingini se-granite futhi njengoba yonke into yacekelwa phansi eMpini Yezwe II, umoya wasendulo uwumphumela womsebenzi omkhulu wokubuyisela, iphrojekthi yonke eyaqedwa kuphela ngo-1971.
Namuhla ungakwazi ukuhamba yonke indlela ye- izindonga nezinsimbi, ukuze ujabulele imibono, futhi ujabulele amabhishi ayo, phuma uyodla, uphumule futhi uchithe impelasonto ende engcono kakhulu ongayicabanga. I-Saint Malo iyindawo ehamba phambili yalokhu.
Ngaphakathi kwendlunkulu kukhona I-Château de Saint Malo, ehlaba umxhwele, namuhla iguqulwe yaba ihholo ledolobha kanye noMnyuziyamu waseSaint Malo. Ngaphakathi emnyuziyamu kunemibukiso eminingana, kodwa ebaluleke kakhulu yileyo ekhuluma ngomlando wasolwandle wedolobha kanye nokuhlala, ukucekelwa phansi nokwakhiwa kabusha kweMpi Yesibili.
Futhi ngaphakathi kweCitadel kukhona I-Cathedral yaseSaint Vincentt nombhoshongo wawo ovunguzayo okhuphuka ngaphezu kwemigwaqo. Kube khona isonto kule ndawo kusukela ngekhulu le-XNUMX, kodwa isonto le-Gothic lamanje lisuka ekhulwini le-XNUMX. Uzobona lapha i-plaque ekhumbula ukusuka kuka-Jacques Cartier eya eCanada.
La Isango likaSaint Vincent Yisango elikhulu lokungena eCitadel. Ngaphakathi naphambi kweNqaba Lena indawo ka-Chateaubriandnamuhla ingxenye ephilayo yedolobha enezindawo zokudlela namahhotela. Ngaphandle kwesango kukhona amadokodo okuhweba. Ngokwesibonelo, kukhona I-L'Hotel d'Asfeld, isithabathaba sekhulu le-XNUMX obalwa nabambalwa abanenhlanhla abasinde emabhomu. Yakhiwa umnikazi wemikhumbi ocebile, umqondisi weFrench East India Company, uFrancois-Auguste Magon.
Ohlangothini oluseningizimu yezindonga kukhona Ichweba laseDinan, indawo ethokozisayo uma ufuna ukugibela isikebhe. Kunezikebhe ezima lapha kafushane lapho zikhuphuka ngomfula noma ngasogwini ziya eCape Frehel. Kuphinde kuphawule ukuqala kwe-Moles des Noires ngendlu yayo yesibani.
Ngaphandle Porte des Bes, okunikeza ukufinyelela ekugcineni enyakatho ye I-Bon Secours Beach, bangabo Izindawo zokuhlala e- Vauverts kanye nesifanekiso se-corsair yendawo edume kakhulu, uRobert Surcouf. INorthwest of the raparts ingumbhoshongo, i I-Bidoune Tower, nemibukiso yesikhashana.
Ngaphandle kwezindonga zaseSaint Malo, ngemuva kwetheminali yesikebhe eningizimu yenqaba, kukhona isifunda esidala kunazo zonke, esasungulwa ngezikhathi zamaRoma: iSaint Servan. Ngasemfuleni uzobona okumangalisayo I-Solidor Tower, eyakhelwe ukuvikela umnyango weRance, namuhla ngemnyuziyamu. Uhambo luthatha imizuzu engama-90 uma ufuna ukulwenza.
Isiza somfula i-Rance River yinhle kakhulu futhi. Indawo yonke yasemaphandleni ezungeze i-citadel inhle kakhulu Inezindlu zabathengisi abacebile baseSaint Malo. abanye baye izivande zayo zivulekele umphakathi, isibonelo, iParc de la Briantais. Kukhona futhi i-aquarium enkulu, nethangi laso elikhulu likashaka.
Izindawo zokuhlala e- Parame ikhulile ngokuhamba kweminyaka futhi namuhla isebenza njengendawo yokungcebeleka yasolwandle yaseSaint Malo uqobo. Ulwandle lwayo lungamakhilomitha amathathu ubude, ilona eliheha kakhulu, nakuba uma kunegagasi elikhulu liyambozwa. Ungahlala lapha, maningi amahhotela abheke olwandle.
Ukukhuluma ngakho amabhishi nolwandle, abantu babheke nalokhu, ngale kwendlunkulu. Amabhishi neziqhingi zaseSaint Malo nazo zithola izivakashi ehlobo. Amabhishi akhona anesihlabathi esihle esimhlophe futhi kunedlanzana leziqhingi ezinamadwala ongafinyelela kuzo pie. Eziningi zalezi ziqhingi banezinqaba ezindalas, amathuna futhi yebo, ukubukwa okukhulu kwendawo ezungezile.
Isihlabathi esiveziwe senza kube nokwenzeka ukuhamba uhhafu wesifunda seDolobha Elidala ohlangothini olusentshonalanga futhi ohlangothini olusenyakatho phakathi kweMoles des Nories kanye nenqaba yaseSaint Malo. Ngasempumalanga yenqaba UPlaya Grande engena esifundeni saseParame. Uma uthanda umbono wokuvakashela iziqhingi, khona-ke isimiso sesikebhe sisemnyango wePorte St. Pierre.
I-Mole Beach ikude eningizimu futhi ihlezi phakathi kweMole des Noires kanye nenqaba yaseHolland. Ibhishi lincane futhi livikelekile ngakho liyindawo efunwa kakhulu ehlobo. I-Bon Secours Beach inkulu futhi yinde futhi itholakala ohlangothini olusenyakatho ye-Holland Bastion ngePorte St Pierre. Kukhona iklabhu yokudoba erempini ngezansi komnyango. Ungakwazi futhi ukujabulela okugeza olwandle in the i-bon sea pool lapho amanzi ephansi.
U-Chateaubriand wayengusopolitiki waseFrance nombhali wezothando waseSaint Malo.. Ithuna lakhe lisesiqhingini saseGrand Be, esinye seziqhingi ezinamadwala ongafinyelela kuzo ngezinyawo. Ungcwatshwe lapha ngoba efuna kube yindawo yakhe yokugcina lena. Kwakungo-1848 futhi uzobona isiphambano esilula esibheka ulwandle. Ngakolunye uhlangothi Petit Be, esinye isiqhingi esingafinyelelwa ngezinyawo uma kunegagasi eliphansi.
Lapha ePetit Be iyona egcinwe kahle kakhulu I-Fort du Petit Be ukuphola kusukela ezikhathini zikaLouis XIV futhi esanda kuvulelwa izivakashi, njalo iphansi kwamagagasi. Uzobona izimbangi ezindala ezinhle kakhulu. I Eventail Beach ingaphandle kwezindonga zenqaba yasenyakatho. Ingolunye lwamabhishi amathathu anamadwala endaweni, kukhona amathathu, futhi ixhunywe kwiGrand Plage noma iPlaya Grande eFort National.
Le Nqaba Yesizwe yaqala ngo-1689 futhi yaklanywa uVauban, kanye nalo lonke umugqa wezokuvikela waseSaint Malo. Inhloso yayo: vikela abazimele baseFrance ekuhlaselweni kwesiNgisi njalo babephumelela. Uhambo lwale nqaba luthatha isikhathi esingaphezudlwana kwesigamu sehora futhi uzobona amagumbi amaningi angaphansi komhlaba, futhi ujabulele izibonakude zawo ezibekwe ezindongeni.
Ekugcineni, Yini ongayenza eduze kwaseSaint Malo? Yiziphi izinkambo ezingaba khona? Hhayi-ke, ziningi futhi okuhle kunakho konke ukuthi asikho isidingo sokuba nemoto ngoba isevisi yesitimela namabhasi ihlanganisa eziningi zalezi zindawo. ungaya ku Mont St. Michel, ukuya edolobhaneni lasendulo laseDinan, ungahlanganisa amabhishi futhi uhambe I-Cancale, uDinard ngokwakhe noma Ugu lwe-Emerald.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » EFrance » Yini ongayibona eSaint Malo, eFrance
Yini ongayibona eSierra de Gredos